Nezvedu - Gaobeidian PRISES Biotechnology Co., Ltd.
PRISES Biotechnology ndeye R&D yakavakirwa mugadziri, anoita mukusimudzira, kugadzira uye kutengeserana kwe in vitro Diagnostic Reagents (IVD) neMedical Equipment, iyo yakabvumidza kugadzirwa nekutengesa zvigadzirwa zveIVD kubva kuNMPA (CFDA) uye ichishandiswa pasi pehunhu system ye ISO 13485, yakawanda yezvigadzirwa zvakasimbiswa neEC mucherechedzo.
Fekitori yedu yakavambwa muna2012 uye iri muGaobeidian City, iri padyo neXiongan New Area neBeijing. Iyo inovhara nzvimbo ye 3,000 mativi metres, kusanganisira kirasi 1000,000 yakachena semusangano ine 700 mativi emamita, kirasi 10 zviuru zvey microbiological yekuyedza imba ine 200 mativi metres, akashongedzerwa-emhando yepamusoro makamuri ekuongorora, ekutsvagisa uye ekuvandudza marabhoritari, nezvimwe.
ZVINOKOSHA Biotechnologyiri kuburitsa weti yakashata yekuyera kubereka, senge bvunzo yemimba, ovulation bvunzo kana FSH bvunzo yekushandisa kwehunyanzvi uye kuzviongorora wega pasi pezita rezita reGolden Nguva, pamwe neOEM / ODM hwaro. Iyo iri kupawo yakawandisa huwandu hweImunochromatography yakavakirwa-nhanho bvunzo nekukurumidza yezvirwere zvinotapukira & Zvirwere zvekufema zveHBsAg, Anti-HBs, HCV, HIV 1/2, Syphilis, Malaria Pf / Pv, Dengue IgG / IgM, Dengue NS1, H. Pylori, Covid-19 Antigen bvunzo, Covid-19 Antibody bvunzo, Covid-19 Neutralizing Antibody bvunzo, uye imwe yakasarudzika miedzo yekukurumidza, mask, Disposable Virus Sample Tube, makondomu, nezvimwe.
Zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa zvakanaka mumusika weChina, zvinotumirwawo kune vatengi munyika dzakadai sePoland, United Kingdom, Germany, Portugal, France, Bulgaria, Turkey, Ireland, Egypt, South Africa, Madagascar, South Korea, Peru nezvimwewo. kune bhizinesi musimboti wekubatsirana mabhenefiti, isu takave neyakavimbika mukurumbira pakati pevatengi vedu nekuda kwedu kwehunyanzvi masevhisi, mhando zvigadzirwa uye zvemakwikwi mitengo. Isu tinofara kushanda newe kuti ubudirire uye tinokuunzira zvigadzirwa zvinogutsikana
NGUVA YEMAHARA - Yepasirose-inozivikanwa zita re in-vitro yekuongorora reagents.
Makore gumi achiramba achivandudza ruzivo mune ye-vitro yekuongorora reagents indasitiri.